Gabadh Soomaali ah oo qoyskeeda ay ku ogaadeen arrin aysan filaneynin - Jigjiga Online
HomeSomalidaGabadh Soomaali ah oo qoyskeeda ay ku ogaadeen arrin aysan filaneynin
“Maxaa tiri?! Hilibka waan ka caagganahay aa?….yaah?!… Maxaa xiga marka… ma waxaad tuuri rabtaa xijaabka?!”
“Waxaan jeclaan lahaa inaan hooyadey muuqaal ka duubo markaas! jirkeeda oo dhan wuu isbaddalay. Waxay ii arkeysay sidii inaan qof dilay oo kale”, ayey tiri Sumaya oo 18 jir ah, kana soo jeedda galbeedka London.
“Anigana waxaan dhahay ‘hooyo, aniga qof bani’aadan ah ma dilin. Wax sidaasoo kale u weyn ma sameynin”.
Da’deedu waxay ahayd 16 xilligaas, jilibka ayeyna ka dhaawacneyd, sidaas darteed ayuuna aabaheed ugu keenay wax fiican. “Markii uu guriga yimid, wuu ii yeeray, raashinka digaagga ah ayuuna gacanta ku hayay”, ayey tiri iyadoo dib u xasuusaneysa dhacdadaas. “Waa raashinkii aad ugu jecleyd ayuu igu yiri isagoo dhoollacaddeynaya”.
“Quraacda, qadada iyo cashadaba hilib ayaan ku sameysan jirnay, hilib ayaa raashin walba noo ahaa”, ayey tiri.
Gudaha Britain tirada Muslimiinta waxay ka tahay qiyaastii 4.6% ka mid ah tirada guud ee shacabka, laakiin sida lagu sheegay daraasad ay sameysay hay’adda wax soo saarka hilibka ee AHDB Beef & Lamb, 20% ka mid ah hilibka lagu sameeyo UK waxaa isticmaala muslimiinta.
“Waxaan arkay gabdho caddaan ah oo dhuudhuuban, oo sheegaya in qofkii sidooda oo kale doonaya inuu cuno khudaarta kala duwan”, ayey tiri.
“Markii aan isku dayay, oo aan dhowr bilood waday, waxaan dareemay inaan aad ugu fiicnaanayay”, ayey tiri Sumaya.
“Aabe wuxuu igu yiri: ‘maxay tahay xushmad darradan, waa maxay sababta aad u cuni la’dahay raashinka aan kuu keenay?”.
Sumaya waxay hadda wax ku qortaa website looga hadlo faa’iidada khudaarta, waxayna farriimo taageero ah ka heshay dad badan oo muslimiin ah, kuwaasoo doonaya inay billaabaan cuntada khudaarta kaliya ah.